Vaovao - fanasokajiana sodina tsy misy tohana
1. Fanasokajiana amin'ny fomba famokarana
(1) Sodina tsy misy fangarony - fantsom-bokotra mihodina, fantsom-boalavo mangatsiaka, fantsom-bokatra mangatsiaka, fantsom-panafody, fantsona fantsom-boaloboka (2) fantsona vita amin'ny fangarony (a) Araka ny fizotrany - fantsom-boaloboka arc, fantsom-bozaka fanoherana (avo lenta, hafanana ambany) , fantsom-pitrandrahana entona, fantsom-pandehanana lafaoro (b) arakaraky ny tsipika fanamafisam-peo - fantsona voaforona mahitsy, fantsona voaforona spiral.
A. Sodina vy tsy misy fangarony mafana: ny horonan-taratasy mafana dia mifanohitra amin'ny hatsiaka mihodina, izay mihodina eo ambanin'ny mari-pana fanamafisam-peo.
Adavantage: afaka manimba ny fikambanana casting ingot, manadio ny voam-by ary manala ny lesoka amin'ny mikraoba, izay mahatonga ny vondrona vy ho voajanahary, hatsaraina ny fahombiazan'ny mekanika. Ity fanatsarana ity dia hita taratra indrindra amin'ny lalana mihodina, ka tsy misy ny vy isotropic lava kokoa amin'ny lafiny iray, ny bubble, ny triatra ary ny looseness natsangana nandritra ny fandrotsahana dia azo amboarina ao ambany mari-pana sy tsindry ambony ihany koa.
B. fantsom-by vy mangatsiaka: ny fantsom-pandrefesana mangatsiaka mangatsiaka (GB3639-2000) dia ampiasaina amin'ny rafitry ny mekanika sy ny fitaovana hydraulic miaraka amin'ny fahamendrehana sy ny latabatra avo lenta.
Sodina mangatsiaka voasintona na mangatsiaka nanakodia fantsona vy tsy misy fanjaitra miaraka amin'ny famaranana tsara.
Tombony: afaka manimba ny firafitry ny vy ingot, manadio ny voan'ny vy ary manafoana ny lesoka amin'ny mikraoba, mba hahafahan'ny mikraostran'ny vy hangeja ary azo hatsaraina ireo toetra mekanika. Ity fanatsarana ity dia hita taratra indrindra amin'ny lalana mihodinkodina. , ka ny isan'ny vy dia tsy isotropika intsony; ny vovoka, ny triatra ary ny fahamaotinana natsangana nandritra ny fandatsahana azy dia azo ahodina ao ambanin'ny maripana sy fanerena avo lenta ihany koa.
C. fantsom-panafody: ny banga vita amin'ny fantsona mafana dia apetraka ao anaty varingarina fantsom-panafody mihidy, ary ny tsorakazo voavaha dia mihetsika miaraka amin'ilay tsorakazo fitrandrahana mba hialana amin'ny ampahany mivoaka avy ao amin'ilay lavaka maty kely kokoa. Ity fomba ity dia afaka mamokatra fantsom-by misy savaivony kely.
Adavantage: Miaraka amin'ny fametahana metaly tsara sy ny firafitry ny fanamiana, dia mety amin'ny famokarana fantsom-by rehetra, indrindra ho an'ny famokarana metaly avo, vy tsy azo ovaina ary karazana fantsom-pifandraisana miendrika manokana. Noho ny tombony azo avy aminy, ny vokatra fantsom-boaloboka voafafa mafana dia manana fanantenana tsy azo soloina amin'ny sehatra avo lenta sy lehibe amin'ny toekarem-pirenena toy ny indostrian'ny tafika, angovo nokleary, angovo hafanana, fiaramanidina, fitrandrahana, lavadrano ary indostrialy petrochemical. Ny fiezahana hikaroka sy hampivelatra avo lenta, atiny teknolojia avo lenta ary lanjan'ny vidin'ny fantsom-boaloboka avo lenta, hampiroborobo ny fivoaran'ny teknolojia fantsom-pirenena vy farany avo lenta ary hanamafisana ny tanjaka ara-toekarena feno manana ny lanjany lehibe
3. Fanasokajiana isaky ny fizarana
(1) Fantsona vy tsotra - fantsom-by boribory, fantsom-by vy, fantsom-by vy elliptic, fantsom-by vy telozoro, fantsom-by vy hexagonal, fantsom-by vy diamondra, fantsom-by vy octagonal, fantsom-by vy semicircular, ary hafa (2) fantsom-by vy sarotra - fantsona vy tsy mitovy fitoviana, fantsom-by vy miendrika valizy dimy.
Sodina, fantsom-boaloboka vita amin'ny vy convex, fantsom-by vy kambana roa sosona, fantsom-by vy voa-melon, fantsom-by vy, fantsom-boaloboka mitafo, fantsom-by vy, hafa.
4. Fanasokajiana araka ny hatevin'ny rindrina - fantsom-by vy manify, fantsom-by vy matevina.
5. Fanasokajiana amin'ny alàlan'ny fampiasana - fantsona, fitaovana fampiasa amin'ny rano, indostria mekanika, solika, fandavahana geolojika, kaontenera, indostrian'ny simika, tanjona manokana, hafa.